crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> November | 2020 | HimiloNetwork
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 287 Views
MUQDISHO (HN) — Dood adag ayaa ka dhalatay muuqaalka haweeney nadaafadda u qaabilsan shirkad ku taalla Shiinaha kaas oo la arkay iyada oo kortagga lagu saxaroodo kasoo darsanaysa biyo u muuqda inay nadiif yihiin si ay u cabto. Haweeneyda oo goor hore shaqada nadaafadda shirkadda dhameysay ayaa ugu yeereysa maamulaheeda si uu uga marqaati kaco heerka hufnaan ahaaneed oo ay ...
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 556 Views
MUQDISHO (HN) — Haweeney 56 jir ah taas oo qorsheynaysa inay furriinkeedii 10aad gasho ayaa sheegtay inaysan joojin doonin guursiga ilaa ay ka hesho qofkii ku habboonaa nolosheeda. Cassey, oo ah ganacsato Maraykanka ku nool ayaa kasoo muuqatay barnaamijka Dr. Phil oo lagu gorfeeyo talooyinka guurka iyo lammaanaha xiriirkooda ku saabsan. Waayo 10 guur oo ay gashay kaddib, wali ma aysan helin ...
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 234 Views
MUQDISHO (HN) — Lammaane u dhashay waddanka Switzerland ayaa gabadhooda ugu magac-daray Twifia si ay u helaan 18 sano oo qad free ah. Lammaanaha ayaa ka fal-celiyay xayaysiis ay barteeda facebook soo dhigtay shirkad Swiz ah bixisa adeeg internet ah taas oo oranaysay in – si loogu sahlo qad bilaash – qoyskii wiil kusoo kordha uu u bixiyo Twifus halka kuwa ...
Ninkii sida yaabka leh caan uga dhex noqday TikTok.
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 233 Views
MUQDISHO (HN) — Da’ dhexaad u dhashay dalka Fiitnaam ayaa noqday qof caan ka ah barta TikTok kaddib markii uu kasoo muuqday muuqaallo uu isaga oo shiban iska soo duubayo. Anh Tran Tan, waxaa aalaaba la arkaa isaga oo fiirinaya kaamirada oo kaliya – halmar aan dhinac isku nuuxinayn weliba ay usii dheer tahay aamusnaan. Waxa kaliya gadaashiisa ka daaran ...
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 452 Views
MUQDISHO (HN) — Xilli dhawaan la daah-furay jaadka cusub ee iPhone 12, haddii ay kugu adag tahay inaad gadato ama gaari la’dahay halkii aad ka gadan lahayd, shirkad Shiinees ah ayaa war farxad leh la wadaagaysaa bahda jecel sidashada iPhone. Jaadadkii hore ee iPhone-ka sida iPhone X iyo iPhone 11 hadda waxaa lagaaga dhigi karaa iPhone 12 iyada oo lagaaga ...
Canbaareyn loo jeediyay Shirkad muddaysa waqtiga isticmaalka Musqulaha.
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 278 Views
MUQDISHO (HN) — Kuaishou oo ah shirkad tiknooloji oo xarunteedu tahay Beijing ayaa caro xoogan ka dhex abuurtay baraha bulshada Shiinaha kadib markii musqulaha ay adeegsadaan shaqaalaheeda ay ku kor dhejisay tirisada waqtiga. Muuqaallada oo ku baahay baraha ay adeegsadaan Shiineeska ayaa caro xooggan kala dul dhacay – iyaga oo falkan ku tilmaamay mid ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Shirkadda ...
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 340 Views
MUQDISHO (HN) — Ey daacad ah ayaa maareeyey inuu dib u laabasho cajiib ah ku sameeyo guriga reerkiisa oo u jira 60km kadib markii lihilihiisa uu kaga lumay boosteejo tareen. Eyga oo lagu magacaabo Dou Dou, waa 7 jir ay korsadeen qoys Shiinees. Bil kahor iyaga oo ku wada sugan goob laga raaco tareennada waxaa uga lumay eygooda. Qofna maanu ...
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 315 Views
MUQDISHO (HN) — Geyfane u ol’oleeya xuquuqda xayawaannada oo ku nool Mexico ayaa loogu yeeray halyey qaran kaddib markii uu hoy u fidiyay ku dhawaad 300 oo eeyo ah iyo xayawaanno kale oo ku dayacnaa jidadka waqtiga dabeysha Hurricane ay ku dhifatay dalkaas. Eeyaha, bisadaha, Bakeylayaasha iyo wixii soo raaca ayuu durba u sameeyey hoy u kaga gaashaantaan qabowga iyo ...
London – Muslim toddobaadle u quudiya 300 oo darbi-jiif ah.
Taageere Liverpool: “Saleh ayaa sabab u noqday inan Islaamo.”